Fanontana - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Farany, ny ampahany farany amin'ny piozila izay fijerinao manokana dia ny fomba fanontana ny marikao sy ny mombamomba ny vokatra ao anaty fonosanao. Eto izahay dia manolotra safidy feno, ao anatin'izany ny fanaovana sikilasy, fanonta offset, HTL / Heat Transfer Label, nohitsakitsahana mafana, etching laser. Manolotra serivisy ihany koa izahay hanamboarana boaty vita pirinty ho an'ny filanao fonosana.
Raha mahatsapa ianao fa tototry ny safidy dia afaka manampy anao ny manam-pahaizana. Mifandraisa aminay
Ny fanaraha-maso ny landy dia ny dingana izay anindriana ny ranomainty amin'ny alàlan'ny efijery voatsabo an-tsary eny ambonin'ny tany. Loko iray no apetraka amin'ny fotoana iray, miaraka amin'ny efijery iray ho an'ny loko iray. Ny isan'ny loko takiana dia mamaritra hoe firy no ilaina amin'ny fanontana lamba amin'ny landy. Azonao atao ny mahatsapa ny firafitry ny sary pirinty eo ambonin'ny haingon-trano.
Ny fanontana offset dia mampiasa takelaka fanontana hamindrana ranomainty amin'ireo kaontenera. Ity teknika ity dia marimarina kokoa noho ny pirinty vita amin'ny silkscreen ary mahomby amin'ny loko marobe (hatramin'ny loko 8) sy ny kanto halftone. Ity dingana ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny fantsona ihany. Tsy hahatsapa ny firafitry ny sary pirinty ianao fa misy tsipika miloko misosa be loatra eo amin'ilay fantsona.